Global Voices teny Malagasy » Rosia: Tetikasanà Crowdsourcing Hikarohana Ireo Ankizy Tsy Hita · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jona 2012 1:58 GMT 1	 · Mpanoratra Teplitsa Nandika (en) i Daniel Alan Kennedy, miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Voina, Akon'ny RuNet
[Fanamarihana avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: ny crowdsourcing dia fomba fampandraisana anjara ny daholobe amin'ny fikaroham-baovao]
Tsy tantara iray tena miavaka ho an'ny Aterineto ny nipoiran'ny ekipa mpikaroka sy mpamonjy aina Liza Alert  [ru]. Taorian'ny 13 Septambra 2010, rehefa nanjavona tany amin'ny vohitr'i Orekhovo-Zuevo [manodidina ny 80 km, na 50 miles atsinanan'i Môskoa] i Liza Fomkina , lasa nazava ny lesoka tamin'ny asan'ireo minisiteran'ny Atitany sy ny Raharaha Vonjy Taitra. Noho ny fandonan'ity tantara mampalahelo ity azy ireo sy ho valin'ny fangatahana fanampiana, nanapa-kevitra ny hiombona ireo mpirotsaka an-tsitra-po mba hahazoana toky fa tsy hisy zavatra tahaka izany intsony hitranga . Ary araka izany dia niforona tety anaty aterineto ny ekipa mpikaroka Liza Alert.
Mifototra amin'ny crowdsourcing ny asan'ny Liza Alert. Misy io fiombonambe io ary saika mivelatra tanteraka noho ny vokatra entiny ao anaty aterineto sy ny fipariahan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao aminy amin'ny toerana midadasika.
Sarin'ny pejy fandraisan'ny lizaalert.org
Lafitsaran'ny Liza Alert:
Fanànany mpirotsaka an-tsitra-po mivelatra any ifotony
Fanohanana ara-baovao avy amin'ny media sy ny fianakaviambe ao anaty aterineto
Vohikala tsotra sy mandeha tsara
Manome fanampiana mivaingana ho an'ny tontolo ivelan'ny aterineto izy.
Afaka nampiditra manam-pahaizana maro manana traikefa ilaina ihany koa ireo mpikarakara, fa tsy ireo vahoaka voakasika amin'ilay tetikasa fotsiny ihany. Ireo mpirotsaka an-tsitrapo miasa miaraka amin'ny Liza Alert anatin'ny fikarohana ireo zaza tsy hita dia ahitana: mpibaiko alika sy mpanara-dia, mpitondra 4×4 sy quad, ary ireo mpitondra sambo sy fiaramanidina. Nikolai Lomakin, mpirotsaka an-tsitrapo iray anatin'izany, milaza hoe :
Tsy afaka mijanona an-trano aho rehefa misy olona tsy hita any anaty ala. Velona izy ireo, ary tsy tombatombana fotsiny izany, ary hikaroka azy ireo izahay mandra-pahitanay azy ireo.
Afaka miara-miasa amin'ny Liza Alert izay olon-tsotra mahatsiaro ho voakasika amin'izany. Ny hany ilaina amin'izany dia ny mameno ny taratasy maha-mpirotsaka an-tsitrapo, ary mirotsaka amin'ny fotoana rehetra anatin'ireo ekipa efa misy.
Azon'ireo mpampiasa aterineto rehetra idirana ny vohikalan'ny Liza Alert. Amin'ny mahaloharano azy, tsotra sy azo ampiasaina izy. Avoaka eo amin'ny pejy fandraisana ny mombamomba ireo tetikasa, fikarohana efa an-dalam-panatanterahana, sns. Hita ao anatin'io vohikala io ihany koa ireo laharanà finday hitaterana ny tranganà fanjavonana sy ny fanontaniana ny fomba fandraisana anjara amin'ny fikarohana. (na eo aza anefa izany dia tsy natao hitan'ny olon-drehetra ny vaovao manokana momba ny fivoaran'ny fikarohana ny olona, taorian'ny nampiasain'ny mpaka ankizy an-keriny ireo rakitra navoaka tao amin'ny vohikalan'ny Liza Alert mba hisorohana ireo manam-pahefana.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/25/34534/
 Liza Alert: http://lizaalert.org/
 Liza Fomkina: https://globalvoicesonline.org/2010/09/27/russia-search-for-liza-fomkina-and-her-aunt/